Yaa ka shaqeeyey Shirqoolka lagu Weeraray Guriga Cabdi Qaybdiid? | Barbaariyaha bulshada
Yaa ka shaqeeyey Shirqoolka lagu Weeraray Guriga Cabdi Qaybdiid?
Xogtan waxaa la siiyey Guddigii Baaritaanka ee uu Madaxda ka ahaa Taliyaha Ciidamada XDS.
Hawlgalkan oo ahaa mid dhawr Maalmood laga shaqaynayey ayaa ku bilowday in Taliyaha Nabad Sugidda G/Banaadir Saadaq Joon uu abaabulka weerarkan uu ka bilaabay kadib markii uu Warbixin ku siiyey Taliyayaasha Ciidamada Weeraray Guriga Cabdi Qaybdiid in Xerada ay degan yihiin la isku qarxin rabo Qofka is qarxin rabana la hayo Macluumaad yar sida Telka uu isticmaalo.
Saadaq Joon labo maalmood ka hor waxa uu siiyey Taliyaha Xerada Teleefon Numberkii uu ku sheegay Qofka Hawlgalka Fulinaya inuu wato, kadibna Ciidankaasi ayaa isku dayey inay ogaadaan halka laga isticmaalayo Telkaasi hasa yeeshee labo maalmood waa dansanaa.
Waxa uu Saaka Saadaq Joon Telkii u dhiibay Nin Magaciisa aanan doonayn inaan sheego Balse xaafada wax ka degan isagoo madaxa cimaamad ku duubtay una sheegay inuu tago Guriga Cabdi Qaybdiid ilaa iyo inta uu ka soo wacayo inuu halkaa sii joogo telkana uu sii daarnaado.
Hasa yeeshee markii la shiday Telka oo ilaa maalintii warbixinta la siiyey baadigoobayey in la daaro telka kadibna markii ay ogaadeen Ciidanka in la daaray telka ayaa isticmaalay GPRS iyo Drone ogaadayna halka uu yaalo Telkaasi iyagoo ka qaaday Sawiro qofka Isticmaalaya oo ay arkeen in Cimaamad Madaxa ugu duuban yahay kuna sugan iridka guriga Cabdi qaybdiid
Kadibna waxa ay Saaka waceen Saadaq Joon oo ay u sheegeen In ay hayaan Sawirada qofka wata Telka iyo Guriga uu ku jiro iyo halka uu ku yaalo markii ay weydiiyeen cidda Degan Gurigaasina waxa uu ugu jawaabay in Hay’ad ay deganaan jirtay Balse haatan aan la deganayn oo uu cidlo yahay.
Ciidankan ayaa isku diyaariyey in fuliyaan hawlgal lagu qaadayo Guriga oo ah kan Cabdi Qaybdiid iyagoo ka dalbaday Saadaq Joon in uu la fuliyo Hawlgalka isagana wuu ka aqbalay una sheegeen inuu is diyaariyo.
Ciidankii Xerada ka soo baxay oo wata Afar Baabuur oo Tikniko ayaa soo istaagay halka loo yaqaan Muuri ama meesha looga leexdo xerada Jaadka ee Degmada Hodan kadibna waxa ay waceen Saadaq Joon una sheegeen halka ay joogaan oo ay isaga sugayaan balse waxa uu u sheegay in hawl kale oo muhiim ah u soo baxday oo uusan iman karin balse uu u sheegay inuu u soo dirayo Bashiir oo ah Taliyaha NISA ee Degmada Hodan kana qayb galayo Hawlgalka meesha ay joogaana ugu imaanaayo.
Kadibna Saadaq Joon waxa uu ku amray Taliye Bashiir inuu ka qayb qaato hawlgal ay la fulinayaan Ciidamada ay tababareen Imaaraadka kadibna sidaa uu ku bilowday.
Yaanan idinka iloobine markii ay soo dhaqaaqeen labadii Ciidan ee NISA iyo Ciidanka Imaaraadka la yiraa Saadaq Joon waxa uu wacay Wiilkii uu Telka u dhiibay isagoo u sheegay inuu damiyo Telka kana soo dhaqaaaqo halkaa, wiilkiina wuu iska soo tagay.
Ciidamadii markii ay u soo dhawaadeen oo Ciidankii NISA ee Degmada Hodan loo tilmaamay Guriga laga Hawl galayo Taliye Bashiir waxa uu fahmay in Guriga uu yahay kii Cabdi Qaybdiid isla markiina waxa uu wacay Saadaq Joon una sheegay In Guriga Cabdi Qaybdiid laga hawl galayo Balse Saadaq ayaa ku jawaabay in uu amarka fuliyo hawlgalkaasna aan la baajin sidaana Gurigii looga hawlgalay- saadaq waxa uu daqiiqado ka dib wacay senator cabdi una sheegay In gurigiisa weeraren imaaratka iyagana waxba ka ogayn.
Hawlgalka Kadib maxaa dhacay?
Baaritaankii la sameeyey ayaa lagu ogaaday Sheekada aan idinla wadaagay hasa yeeshee Saadaq Joon waxa uu ku inkiray in Taliye Bashiir ay isla ogaayeen hawlgalka isagoo amray waa Saadaqe in la xiro Taliyihii NISA ee Degmada Hodan Bashiir.
Sarkaalka kale ee la xiray oo aanan magaciisa haynin ayaa ahaa Sarkaal NISA u qaaabilsanaa Xiriirka wada shaqaynta Ciidanka Imaaraadka tababareen iyo NISA, sidoo kale waxaa la xiray Ciidankii fuliyey Hawlgalka.
Maxaa la ogaaday ?
Baaritaanka waxaa lagu ogaaday in Saadaq Joon keliya uusan qorshan wadan waxaana la xaqiijiyey in arintan uu Maskaxdeeda lahaa Agaasimaha Madaxtooyada Fahad Yasin kaasoo Dalka ka dhoofay Maalintii Warbixinta digniinta ah la siiyey Ciidanka ay Tababareen Imaaraadka.
Ujeedo Caynkee ah ayaa laga lahaa Hawlgalkan?
Ujeedada ugu weyn ee laga lahaa Hawlgalkan ayaa ahaa in wax kasta oo Gurigaasi ka dhaca xitaa haddii dad lagu dilo dusha loo saaro Dawladda UAE lana yiraahdow axaa amray Dawladda Imaaraadka laguna Tilmaamo in Imaaraadku ay qas iyo Jahwareer ka wadaan Gudaha Somalia oo xitaa Xildhibaanadii Xasaanada lahaa ay Ciidankoodu weerarayaan.
Waxaase la xasuustaa In Ciidankaasi ay tababarkooda iyo Qarashkii ku baxay ay bixiyeen Imaaradka laakiin 01/11/2017 ay Ciidankaasi oo tiradoodu dhan tahay 450 ay Dawladda FS la wareegtay RW Xasan kheyre uu ahaa Masuulkii la wareegay Ciidankaasi.
Haddaba Ciidankaasi ma waxaa amra Dawladda FS mise Dawladda Imaaraadka?